IKiddie Ride, Umshini Wemidlalo Yengane, Umshini Wemidlalo Yesipho - UMeiyi
I-Guangzhou Meiyi Electronic Technology Co., Ltd. yasungulwa ngo-2014, itholakala ePanyu Guanghzhou, inhlokodolobha yemidlalo yokududuza eChina. Singabantu inkampani imishini yokuzijabulisa egxile ezimele, ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nensizakalo. Imboni ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-1500, inehholo lombukiso elingu-3000, Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka uhlamvu lwemali….
Ubungcweti busho ikhwalithi ephezulu
Umshini womdlalo wezingane
Umshini womdlalo womklomelo
Umshini womdlalo weHockey
Simulator racing imidlalo
Simulator imidlalo yokudubula
Umshini womdlalo we-Arcade
Imidlalo yamathikithi eLottery
Imidlalo ye-Coin pusher
Ngonembeza Futhi Ngokuphikelela
Kuyo yonke le minyaka, besizinikezele ekwakheni imikhiqizo emisha ehlukahlukene. Ukugxila kwethu ku-R & D, ukuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende ethu ikhwalithi ephezulu nemikhiqizo emisha.
Sizitholele idumela elihle phakathi kwamakhasimende ethu .Sizofingqa ulwazi oluyimpumelelo, sihole imfashini, kanye nezinto ezintsha embonini ukuze zenze imikhiqizo eyingqayizivele.
Ngekhredithi yebhizinisi ezwakalayo, isevisi enhle ngemuva kokuthengisa, Amalungu ethu abasebenzi abanolwazi oluphelele kule mboni bahlala benza yonke imizamo yokuxazulula izinkinga futhi bafeze ukwaneliseka okuphezulu kwamakhasimende.
Sibheke phambili ekubambisaneni namakhasimende amaningi emhlabeni wonke ngentuthuko efanayo kanye nezinzuzo ezifanayo. Siyakwamukela ukuhleleka kwe-OEM ne-ODM nokusabalalisa okuvela emhlabeni wonke ukuvakashela nokubambisana nathi!
Amathiphu Ebhulogi Ngokuvuselelwa Kwasekhaya
Ungayenza kanjani ipaki lakho lokuzijabulisa lezingane ...
1.Isitayela setimu Kunezitayela zezindikimba ezahlukahlukene zokuhlobisa ipaki lezingane, njengolwandle, ihlathi, uswidi, isikhala, iqhwa neqhwa, opopayi njalonjalo. Ngaphambi kokuhlobisa, kufanele kwenziwe ukucubungula okuphelele kanye nophenyo ukuthola ukuthi yiluphi uhlobo lwezingane ...
Kungani imishini ye-claw doll ithandwa kangaka?
Imishini yamadonki kaClaw nazo zonke izinhlobo zemishini yesipho ethengiswayo manje cishe yonke indawo. Ngaphezu kwezitolo zemishini yokudonsa onodoli, basesezikhungweni zezitolo ezinkulu, eceleni kwezindawo zokubukela amabhayisikobho, emaphaseji ezitolo zezingubo zezingane noma ezitolo zokudlela, nasemnyango wesitolo ...
INgqungquthela Yomhlaba Wonke Yezwe kanye ne-Ex ...
NgoNovemba 28,2020, i-13th Zhongshan Amusement Fair China yabanjelwa eZhongshan Expo Center / New World International Convention and Exhibition Center. NgoNovemba 28,2020, umdlalo we-13 weZhongshan International & I-Amusement Fair China (Zhongshan) Isikhungo Samazwe Ngamazwe Nezokuvakasha ...